Isingeniso kwi-The Five Skandhas okanye iAgregregates
Umbhali waseBuddha uthetha ngokuphindaphindiweyo kweSikhamfa ezintlanu, ezibizwa ngokuba yiZihlanu zamaQumrhu okanye iZihlumba ezihlanu. I-skandhas, ngokukhawuleza, inokucingelwa njengezinto ezidibeneyo zokwenza umntu.
Yonke into esicinga ngayo ngokuthi "Mina" ngumsebenzi we-skandhas. Faka enye indlela, sinokucinga ngomntu njengomsebenzi we-skandhas.
Xa uBuddha efundisa iiNyaniso ezine eziBalulekileyo , waqala ngeNyaniso yokuqala, ubomi "yi-dukkha." Le nto idla ngokuguqulelwa ngokuthi "ubomi bubuhlungu," okanye "bunzima," okanye "bungaqiniseki." Kodwa uBuddha wayesebenzisa igama elithi "ukuthintela" kunye "nesimo." Ukuba imeko ixhomekeke okanye ichatshazelwe ngenye into.
UBuddha wafundisa ukuba i-skandhas yayiyi dukkha .
Icandelo le-skandhas lisebenza kunye ngokuzenzekelayo kangangokuthi lidala umqondo wedwa, okanye "I." Sekunjalo, uBuddha wafundisa ukuba akukho "uqobo" ohlala kwi-skandhas. Ukuqonda i-skandhas kunceda ekuboneni ngokuzikhohlisa.
Nceda uqaphele ukuba le nkcazelo yinqanaba elisezantsi. Izikolo ezahlukeneyo zeBuddhism ziqonda i-skandhas ngendlela eyahlukileyo. Njengoko ufunda ngakumbi malunga nabo, unokufumanisa ukuba iimfundiso zesikolo esinye asihambisani neemfundiso zenye. Inkcazo elandelayo ilandelelana njengokuba kunokwenzeka.
Kule ngxoxo ndiza kuthetha ngeZizwe ezithandathu okanye iiSatifikethi kunye nezinto ezihambelanayo:
Iinqununu ezithandathu kunye nezinto ezi-6 ezihambelanayo
1. Iso Ifomu engabonakaliyo
2. Intloko 2. Isandi
3. I-Nose 3. Iphunga
4. Ulwimi 4. Ukutya
5. IQumrhu 5. Izinto ezibonakalayo esizivelayo
6. Ingqondo 6. Iingcamango neengcinga
Ewe, "ingqondo" iyilungu lomqondo kule nkqubo. Ngoku, ukuya kwiiSikhamas ezintlanu. (Amagama angengesiNgesi anikezelwe i-skandhas aseSanskrit. Ayefana e-Sanskrit ne-Pali ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela.)
I-Skandha yokuqala: Ifom ( Rupa )
I-Rupa ifom okanye umba; into enokuthi ibonakale. Kwiincwadi zakuqala zeBuddhist, i-rupa iquka iiNdawo eziMakhulu eziMkhulu (ukuqina, ukukhanya, ukufudumala, nokuhamba) kunye neziphumo zabo.
Ezi ziphumo ziyizixhobo ezi-5 zokuqala ezibalwe apha ngasentla (iso, indlebe, impumlo, ulwimi, umzimba) kunye nezinto ezi-5 ezihambelanayo (ifomu ebonakalayo, isandi, iphunga, ukunambitha, izinto ezibonakalayo).
Enye indlela yokuqonda i-rupa kukucingela njengento ephikisana nokuhlola iingcinga. Ngokomzekelo, into inomsebenzi ukuba ibingqina umbono wakho - awukwazi ukubona ukuba ngaphesheya kwayo - okanye ukuba uyayivimba isandla sakho ekubeni uhlala kwindawo yayo.
I-Skandha yesiBili: I-Sensation ( Vedana )
I-Vedana yintlungu yomzimba okanye yengqondo esiyifumanayo ngokuqhagamshelana nezakhono ezintandathu kunye nehlabathi langaphandle. Ngamanye amazwi, yinto evezwe ngayo ngokuqhagamshelana kweso kunye nefomu ebonakalayo, indlebe ngesandi, impumlo kunye nephunga, ulwimi ngolwazi, umzimba kunye nezinto ezibonakalayo, ingqondo ( manas ) neengcamango okanye iingcamango .
Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba i- manas - ingqondo okanye ingqiqo-iyilungu lomqondo okanye ubuchule, njengeliso okanye indlebe. Sivame ukucinga ukuba ingqondo into enjengomoya okanye umphefumlo, kodwa loo mbono ayikho ndawo eBuddhism.
Ngenxa yokuba i-vedana yinto yokuzonwabisa okanye intlungu, iimeko zifuna, mhlawumbi ukufumana into enokuzonwabisa okanye ukuphepha into ethile ebuhlungu.
I-Skandha yesithathu: Ukuqonda ( Samjna , okanye e-Pali, eSanna )
I-Samjna yiyo i-faculty eyaziwayo. Ininzi yale nto esiyibiza ngokuthi ukucinga ihambelana nokuhlanganiswa kwe-samjna.
Igama elithi "samjna" lithetha "ulwazi olubeka ndawonye." Nguwo umthamo wokuqonda kunye nokuqonda izinto ngokuzihlanganisa nezinye izinto. Umzekelo, sibona izihlangu njengezicathulo ngenxa yokuba sibaxhamla namava ethu angaphambili.
Xa sibona okokuqala ngethuba, sisoloko siphumelela kumakhadi ethu engqondo ukuze sifumane iindidi esinokuzidibanisa nento entsha. "Uhlobo oluthile lwesixhobo esinombambo obomvu," umzekelo, ukubeka into entsha kwiindidi "ithuluzi" kunye "nobomvu."
Okanye, sinokudibanisa into kunye nomongo wayo. Siyaqaphela i-apparatus njengomshini wokusebenzisa umbane kuba sibona kwindawo yokuzivocavoca.
I-Fourth Skandha: Uhlobo lweengqondo ( Samskara , okanye e-Pali, eSankhara )
Zonke izenzo zentshukumo, ezilungileyo nezimbi, zifakwe kwiqela lokubumba kwengqondo, okanye i- samskara . Zenzani iindlela zokwenza "ingqondo"?
Khumbula iimizila zokuqala zeDhammapada (i-Acharya Buddharakkhita translation):
Ingqondo ilandele zonke iingqondo. Ingqondo yintloko yabo; zonke ziyenziwa ngengqondo. Ukuba ngengqondo engcolileyo umntu uthetha okanye ukunyamezeleka kulandela kuye njengevili elilandela unyawo lwenkunzi.
Ingqondo ilandele zonke iingqondo. Ingqondo yintloko yabo; zonke ziyenziwa ngengqondo. Ukuba nangengqondo ecocekileyo umntu uthetha okanye enze ulonwabo uyamlandela njengethunzi lakhe elingazange lihambe.
Uluhlu lweengqinisiso zengqondo ludibaniswa ne karma , kuba izenzo zendalo zenza i karma. I-Samskara iqulethe nekarma evulekileyo ukuba izimo zethu zengqondo nezibikezelo. Iingcipheko kunye nokubandlululwa kukulolu hlobo, njengoko kwenza umdla kunye nokukhangisa.
I-Fifth Skandha: Ubulumko ( Vijnana , okanye ku Pali, Vinnana )
I-Vijnana yempendulo enomnye wezakhono ezithandathu njengesiseko sayo kunye nenye yezinto ezi-6 ezihambelanayo nento yazo.
Umzekelo, ukuqonda kwimizi - ukuva - inentendelezo njengesiseko sayo kunye nesandi njengento yaso. Ingqondo yengqondo inengqondo (manas) njengesiseko sayo kunye nembono okanye ingcamango njengento yayo.
Kubalulekile ukuqonda ukuba le nkcazelo okanye ukuqonda kuya kuxhomekeka kwezinye i-skandhas kwaye ayikho ngokuzimeleyo kubo. Kukwazisa kodwa kungabonakali, njengokuba kuqatshelwa ngumsebenzi we-skandha yesithathu.
Olu lwazi aluyiyo inzwa, yinto yesibini ye-skandha.
Ininzi lethu, le ndlela eyahlukileyo yokucinga "ngengqondo."
Kutheni Oku Kubalulekile?
UBuddha wavezela ingcaciso yakhe ye-skandhas kwiimfundiso zakhe ezininzi. Ingongoma ebalulekileyo yenziwe kukuba i-skandhas "ayikho." Zizithuba zesikhashana, eziyimimiselo. Akunanto yomphefumlo okanye isisigxina soqobo .
Kwiintetho ezininzi ezibhaliswe kwi- Sutta-pitaka , uBuddha wafundisa ukuba ukunamathelela kula maqela njengokuba "mna" akukho nto. Xa siqonda ukuba ezi ziqulatho zizinto nje zesikhashana kwaye kungekhona-mna, sisendleleni yokukhanyisa .
Zhangzi's (Chuang-Tzu) I-Butterfly Dream Parable
Ngaba UThixo Uyakubiza?
Ingxabano yeZenzo eziQinisekisayo: Imiba emihlanu yokuqwalasela
Amanqaku okuPhumela isiTshayina
Amashishini amakhulu: Ushishino
Umsebenzi Omkhulu okanye iMagnum Opus
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yase-Oak Grove
I-Venus kwi-Aries Man
UDonald Harvey - Ingelosi Yokufa
Iifomu zeNinzi zeNoun
Isilinganisi sokulinganisa IsiMotion in Plate Tectonics
Iimagazini zeeDorhwebo eziLungileyo
I-Master ne-Apprentice Relationships kwi-Star Wars Universe
Isingeniso kwi-Five Shen yamayeza eTshayina
Iikhompyutha zeNASCAR Sprint Cup Race Oldest
Iindlela zokuphucula isiJamani sakho
Injongo Yokuthenjwa Kwezenkolo
Iifrimu ezili-10 eziphambili zeeMifanekiso eziDala